Archive du 20170314
Bemarenina ny fanjakana Hiverina ny Magro ?
Efa tena nandefitra i Marc Ravalomanana raha ny zavatra niainany sy nampizakaina azy teto Madagasikara no dinihina. Naongana teo amin�ny fitondrana ka voatery nanao sesitany ny tenany tany ivelany.
Antalaha Niesona tao amin�ny A�roport ny praiminisitra
Tonga ny mpandeha, ny mpanamory tsy hita. Niesona tao amin�ny seranam-piaramanidina Antalaha efa ho adim-pamantaranandro iray latsaka ny delegasion�ny governemanta notarihin�ny
Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy 11 amin�ny 33 no hotendren�ny filoha
Nankatoavin�ny filankevitry ny minisitra ny herinanrdo lasa teo ny fananganana ny komity hisahana ny fifantenana sy fanendrena ireo mpikambana vaovao handrafitra ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM) amin�ny endriny vaovao.
Ho tratra foana anie e�
Miarahaba anao jean a..efa tena mandeha tsara ve ilay ankety e, sao mantsy vitan�ny raharaham-pihavanana misy tsindry bokotra eo indray ny raharaha famonoan�olona sy fandoroana tanana tany avaratra andrefana farany teo iny a.Fa tena fady anareo mihitsy ve ilay mba mampita vaovao e ?Avy eo rehefa misy zavatra mivoaka tonga fofona be nareo fa hoe vaovao diso.
Takaitra navelan'i Enawo Mankahery ny Malagasy i Etazonia sy Frantsa
Sesilany ny fanambarana ataon�ireo firenen-dehibe, izay maneho hatrany ny fiombonam-po amin�ny Malagasy manoloana ny loza voajanahary izay namoizana ain�olona maro.
TRABOINA AO ANOSIPATRANA Tafakatra 200 ireo milahatra fanampiana raha 50 no tena izy
Tena be dia be tokoa ireo olon-tsotra manararaotra ireo traboina tsy manan-kialofana eto an-drenivohitra amin�izao fotoana izao.
Efa zatra !
Moa va tsy efa zatra miaina loza amin�atambo ny Malagasy raha jerena amin�ny zava-misy sy iainana ankehitriny ?
Fidirana ho mpiasam-panjakana 200 monja ireo mpampivelona voaray ...
200 monja tamin�ireo mpampivelona marobe nifaninana hiditra ho mpiasam-panjakana tamin�ity taona 2017 ity no voaray ary telo ny mpitsabo mpanampy.
Fitrandrahan�ny Sinoa �gaz� ao Sakaraha Ahiana hivadika gidragidra
Tsy eken�ireo vahoaka ny fanitarana tany ataon�ireo sinoa mitrandraka etona natoraly mankany amin�ny faritra fanajariana razana alohan�ny toeram-pandevenana.
Haisoratra sy kabary Nivoaka ny "Saontsin-droazako"
Mbola betsaka amin�ireo kolontsaina isam-paritra eto amintsika, arahin�ny fomban-tany ny manakana ny vehivavy tsy hikabary.